Kalsooni kala noqoshada Xasan Cali oo reer galbeedku ka gariireen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kalsooni kala noqoshada Xasan Cali oo reer galbeedku ka gariireen
Kadib markii si kedisa xukunka looga tuurey wasiirki koowaad ee xukuumada Somaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa kalsooni kala noqoshadiisa ka gariiray reer galbeedka iyo Maraykanka, taas oo ka dhigan inuu ahaa nin ay iyagu wateen.
“Ficilladan xukuumadii Xasan Cali Kheyre looga tuurey meesha waxay xushmad darro weyn ku yihiin aas-aasyada dastuuriga ah ee Soomaaliya ee Midowga Yurub uu maal-gelinayey,” ayuu yiri afhayen u hadlay Midowga Yurub.
“Midowga Yurub wuxuu si taxaddar leh dib ugu eegi doonaa sida ay ku yimaadeen dhacdooyinkan iyo cidda qaadeysa mas’uuliyadda iyo heerka ay Soomaaliya ka weecin karaan horumarka ay sameyneysay,” ayuu raaciyay.
Waxa sidoo kale ka gariiray safaarada Maraykanka oo dareemay inay lumiyeen saaxiib weyn oo sir ay wadaageen. Si kastaba ha ahaatee waxa muuqata munaafaqa reer galbeedka iyo Maraykanka oo haba yaraatee aan gacan muuqata ka gaysan kobaca dhaqaalaha dalka.
”Haddaad saa u jeclaydeen maxaa u siin weydeen dalka lacag uu wax uga qabto shaqo la’aanta iyo la dagaalanka musuqmaaqa, ayadoo la ogyahay inaa tihiin aabaha musuqa ayuu yiri Cali Calasow.
Waxaan ognahay in reer galbeedku caqabad ku yihiin horumarka dalka, dib u dhiska iyo weliba difaaca qaranka, waxana taas la wadaaga Maraykanka, oo ka walwalsan
Madaxweyne Farmaajo oo aqbalay fariinta barlamaanka ayaa markiiba buuxiyay booskaas si hawsha qaranka u sii socota.